Tag: nta akụkọ | Martech Zone
Kwa ubochi, ana m enweta otutu otutu n’ime igbe mbata m. Edere ọtụtụ n'ime ha nke ọma, imirikiti adịghị mkpa na saịtị m, mana enwere mgbe niile ọla edo na ikpo nke spam na-eme ka m leba anya. Enwetara m olulu n’izu a ebe email gosipụtara ihe dịtụ iche ma nye m ezigbo ahụmahụ. Enwere m mmasị na ohere a ịgwa ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na njedebe nke ọzọ
Nke a nwere ike ịbụ otu ihe egwu kachasị ụjọ nke egwu egwu na nnwere onwe free na mba a. Senatelọ omebe iwu ewepụtala otu ọta mgbasa ozi nke kọwapụtara akwụkwọ akụkọ na ebe otu ndị ọrụ nta akụkọ na-echekwa bụ ndị na-arụ ọrụ nchịkọta akụkọ. Site na nlele ụkwụ 10,000, ụgwọ ahụ dị ka nnukwu echiche. LA Times na-akpọ ya "Bill iji kpuchido ndị nta akụkọ". Nsogbu bụ asụsụ kpatara ya